Lesona 5 hianarana avy amin'ny tantaran'i Jakôba sy i Esao | TOKO VAVAKA
Home Fiainana araka an'Andriamanitra Lesona 5 hianarana avy amin'ny tantaran'i Jakôba sy i Esao
Lesona 5 hianarana avy amin'ny tantaran'i Jakôba sy i Esao
Androany dia hianarantsika ny lesona 5 hianarana avy amin'ny tantaran'i Jakôba sy i Esao. I Jakôba sy i Esao dia zanakalahin'i Isaka sy Rebeka. I Jakôba dia mpiandry omby raha i Esao kosa dia mpihaza masiaka. Kambana ireto zanakalahy roa ireto ary samy manana ny tanjany sy ny toetrany izy ireo. Raha tia bebe kokoa an'i Jakôba i Rebeka reniny, dia tia kokoa an'i Esao rainy i Esao. Ny tantaran'ireto zanakalahy roa ireto dia toy izany izay misy lesona samihafa ho an'ny roa tonta ray aman-dreny ary ny tanora tsirairay.
Ankoatry ny fananan'i Jakôba fanekempihavanan'Andriamanitra tamin'ny fiainany dia nisy antony hafa koa nahatonga ny fisian'ny tsodranon-drainy fa tsy i Esao izay zaza voalohany. Andriamanitra dia nanao ny fikasany momba ireo zanakalahy roa ireo. Andriamanitra dia nilaza tao amin'ny bokin'i Malakia fa i Jakôba tiako ary i Esao halako. Na eo aza ny fitiavana sy ny hatsaram-panahin'Andriamanitra amin'i Jakôba dia mbola misy lesona vitsivitsy azo raisina amin'ny tantaran'izy ireo.
Ny lehilahy iray dia tsy maintsy mifehy ny vavony
Ny iray amin'ireo antony nahatonga an'i Esao ho tonga mpandray ny tso-drain'izy ireo dia satria namidiny tamin'i Jakôba ny fizokiany mba hahazo sakafo iray lovia. Ny soratra masina ao amin'ny bokin'i Genesisy 25: 29-34 Ary raha nahandro nahandro Jakoba, dia tonga avy tany an-tsaha Esao ka reraka. Ary hoy Esao tamin'i Jakoba: Avelao aho hihinana ny sombin-mena, fa reraka aho. Ary noho izany ny anarany dia natao hoe Edoma. Ary hoy Jakoba: Amidio amiko ary aloha ny fizokianao. Ary hoy Esao: Saiky ho faty aho: inona no soa azoko amin'ny fizokiana? Ary hoy Jakoba: Mianiana ary amiko. dia nianiana taminy izy ka nivarotra ny fizokiany tamin'i Jakôba; ary nomen'i Jakôba mofo sy voanemba masaka tamin'i Esao; ary nihinana sy nisotro izy, dia niainga ka lasa nandeha.
Tsy nahatsiaro tena i Esao fa zokiny izy satria noana. Nila nofenoiny sakafo fotsiny ny kibony mba hamonoana ny hanoanana. Namidiny tamin'i Jakoba rahalahiny tamin'ny lovia iray lovia ny fizokiany. Mety tsy ho fantatr'i Isaka rainy ny fotoana nitrangan'izany teo amin'ireo zanany roa lahy, kanefa, rehefa tonga ny fotoana hanomezana ilay tsodrano ny lahimatoa, dia i Jakôba no nitahy fa tsy Esao. Ny lehilahy dia tsy maintsy mifehy ny vavony. Ny hanoanana dia tsy tokony hibaiko olona.
Tsy mahagaga raha ny bokin'i 1 Korintiana 6: 13 Sakafo ho an'ny vavony ary ny kibo ho an'ny sakafo, nefa samy holevonin'Andriamanitra izy sy izy ireo.
Ny fitahian'Andriamanitra dia tsy mamongotra ny fizotrany
Mba ho lehibe eo amin'ny fiainana ny olona tsirairay dia misy ny dingana tsy maintsy arahana ary raha misy olona mitsambikina amin'ilay dingana, dia nanalava ny fotoana hanaovana izany izy. Niavaka tamin'ny fiainan'i Jakôba izany. Azo antoka fa nanana ny fitahian'Andriamanitra izy, na izany aza, ny fiainany dia saika tsy azo soratana tany an-trano. Niaina tao anaty fahantrana izy ary nilatsaka kely fotsiny tamin'ny fahantrana.
Voalohany, tao an-tranon'i Labana i Jakôba hiasa ho mpiompy omby. Niasa an-taonany maro izy mba hahafahany manambady an-dRahely, fa rehefa afaka fito taona dia nomeny an'i Lea kosa. Tsy maintsy niasa fito taona indray izy ho an-dRahely. Ireo rehetra ireo dia natao hanomanana an'i Jakôba ho tonga lehilahy lehibe. Nandritra izany fotoana izany dia nanjary lehibe tokoa i Esao na dia tsy izy aza no nitondra ilay fitahiana.
Ny lesona tsotra avy amin'izany dia ny zavatra lehibe mandany fotoana ampy hanakorana.
Tsy mankahala olona Andriamanitra
Tsy rahalahin'i Esao va Esao? hoy ny Tompo. «Tiako i Jakôba, fa i Esao no halako. Nataoko tany karankaina ny tendrombohiny, ary navelako ho an'ny amboadia tany an'efitra ny lovany.
Mifanohitra amin'ny fiheveran'ny besinimaro fa tena nankahala an'i Esao Andriamanitra, Andriamanitra tsy mankahala olona. Izy no mpamorona an'izao rehetra izao, ahoana no mety hankahalany ny zavatra noforoniny ?. Ity teny nalaina malaza avy ao amin'ny soratra masina Jakôba tiako ity fa i Esao halako dia ny mamantatra ny halehiben'ny fitiavan'Andriamanitra an'i Jakôba sy ny porofo iray fa zanaky ny fanekena izy. Mandritra izany fotoana izany dia tsy midika hoe tsy hambinina velively Esao. Raha ny marina, Esao dia nanjary lehilahy nanan-karena, nanan-karena sy nanan-kery fatratra talohan'ny nahitan'i Jakôba tanjona.
Afaka namela ny helony haingana i Esao satria lehilahy niova izy. Nanana andevo sy omby betsaka noho ny an'i Jakoba rahalahiny izy. Izany dia mba hampiorenana ny zava-misy fa tsy mankahala olona Andriamanitra.
Ny fihaonana amin'Andriamanitra dia mamaly ny rehetra
Jenezy 32: 24–30 Ary tavela irery i Jakôba, ary nisy lehilahy nitolona taminy mandra-pahamarain'ny andro. Ary rehefa hitan'ilay lehilahy fa tsy naharesy azy izy, dia nokasihiny ny faladian'ny valahan'i Jakoba, ka vaky ny valahany, raha nitolona tamin-dralehilahy izy. 26 Ary hoy ralehilahy: Alefaso aho, fa efa maraina ny andro. Fa hoy i Jakôba: “Tsy havelako handeha ianao raha tsy tahinao aho.” Nanontany azy ilay lehilahy hoe: “Iza no anaranao? "Jakôba," hoy ny navaliny. Ary hoy ralehilahy: Tsy hatao hoe Jakoba intsony ny anaranao, fa Isiraely; satria efa nitolona tamin'Andriamanitra sy tamin'ny olona ianao ka efa naharesy. Ary hoy Jakoba: Mba atoroy ahy ny anaranao. Fa novaliany hoe: "Fa maninona no manontany ny anarako ianao?" Dia nitso-drano azy teo izy. Ary ny anaran'izany tany izany dia nataon'i Peniela hoe Peniela, satria hoy izy: Andriamanitra no nifanatrika tamiko, nefa voavonjy ny aiko.
Ny alina talohan'ny nihaonan'i Jakôba an'i Esao taorian'ny taona maro, zavatra niavaka no niseho tamin'io alina io, dia nifanena tamin'Andriamanitra izy. Voarakitra ao amin'ny Baiboly fa nitolona tamin'ny lehilahy iray izy mandra-pialan-tsasatra. Rehefa hitan'ilay hafahafa fa tsy naharesy an'i Jakôba izy dia niangavy azy hamela azy handeha, fa nandà i Jakôba. Nilaza tamin'ilay lehilahy i Jakôba fa tsy havelako handeha ianao raha tsy tahinao aho.
Voarakitra ao amin'ny soratra masina fa nanontany izay anarany ny lehilahy ary hoy izy hoe Jakôba, ilay hafahafa nilaza taminy hoe: tsy hatao hoe Jakôba intsony ny anaranao fa Isreal satria nitolona tamin'Andriamanitra sy tamin'olombelona ary nandresy ianao. Tamin'io alina io dia nifanena tamin'Andriamanitra i Jakôba ary niova ny fiainany. Ny fahatezeran'i Esao rahalahiny dia gaga noho ny fihaonana nifanaovan'i Jakôba tamin'Andriamanitra nandritra ny alina.
Mbola betsaka ny anarana iray
Jenezy 32:28 Ary hoy ralehilahy: Tsy hatao hoe Jakoba intsony ny anaranao, fa Isiraely; satria efa nitolona tamin'Andriamanitra sy tamin'ny olona ianao ka efa naharesy
Ny anaran'ny lehilahy dia mitondra fahefana. Nandritra ny taona maro dia niaina tao anaty tahotra sy ahiahy i Jakôba momba izay hataon'i Esao rahalahiny aminy rehefa mihaona aminy indray izy rehefa avy nangalatra ny tso-drain'izy ireo. Nivoady i Esao fa hamono an'i Jakôba rehefa mahita azy. Mandritra izany fotoana izany, i Jakôba, na dia nahazo fitahiana aza dia tsy nahita ny fiaretan'ny fiainany.
Saingy taorian'ny nanovana ny anarany hoe Jacob ho Isreal, dia toy ny hoe lasa olom-baovao izy. Ny zava-drehetra momba azy dia niova tamin'io fotoana io ihany. Na i Esao aza tsy nanana safidy afa-tsy ny fihavanana taminy.
Jakôba sy Esao
Previous lahatsoratraTeboka vavaka hanoherana ny vaovao sy ny fomba ratsy
Next lahatsoratraTeboka vavaka mba hamantarana ny fotoana mety
Antony dimy tsy maintsy itaizanao zanaka araka an 'Andriamanitra
Vavaky ny ady ara-panahy 50 mba hahazoana manambady
Zava-bavaka 30 ho an'ny fandrosoana eo amin'ny fiainana
Andinin-teny 10 tokony hivavahanao rehefa mila fanasitranana ianao
Teboka vavaka hialana amin'ny fandriky ny fahavalo